एसईओ के हो?
तपाईं कसरी गुगललाई आफ्नो साइट प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ?
गुगललाई प्रेम गर्नुहोस् तपाईंको साइट वाक्यांश हो जुन गुगल खोजी परिणामहरूको पहिलो पृष्ठमा वेबसाइटको स्तर निर्धारणको लागि प्रयोग गरिन्छ।
SERPs मा एक उच्च श्रेणी ( खोज इञ्जिन नतीजा पृष्ठहरू) वेबसाइट मालिकहरूलाई धेरै तरीकाले मद्दत गर्दछ। उदाहरण को लागी, एक शीर्ष रैंकिंग ब्लग मतलब यो लोकप्रियता र यातायात प्राप्त गर्नेछ, र कुनै पनि व्यवसाय को एक शीर्ष-रैंकिंग वेबसाइट मतलब यो प्रसिद्ध हो र अधिक यातायात साथै सम्भावित ग्राहकहरु लाई आकर्षित गर्नेछ।
आज, यो केवल प्रश्न मात्र होइन तर हरेक वेबसाइट मालिक/डिजिटल मार्केटर/वेबमास्टरको सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो। वा अन्य कुनै साइटको श्रेणी बढाउन बारे चिन्तित।
अन्ततः यस प्रश्नको उत्तर SEO (सर्च ईन्जिन अनुकूलन) शब्दमा निहित छ। एक उत्तम अप्टिमाइज गरिएको साइट खोजी परिणामहरूको सूचीमा मात्र माथि छैन तर तपाईंको उद्देश्य प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
एसईओ मद्दत गरे पछि वेबसाइटको श्रेणी सुधार गर्न, यो स्पष्ट छ कि तपाईं SEOको बारेमा बढी जान्न चाहनुहुन्छ।
एसईओ, खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसन, बिभिन्न प्रकारका बनाउने प्रक्रिया हो। वेबसाइटमा समायोजन गर्दछ ताकि यो Google को खोज परिणाम पृष्ठमा उच्च स्थानमा आउँदछ।
जब तपाइँको वेबसाइट खोजी इञ्जिनहरूका अनुसार अनुकूलित हुन्छ, यसले मानिसहरूलाई तपाइँको व्यवसाय पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ। जब तिनीहरूले उत्पादनहरू, सेवाहरू र यससँग सम्बन्धित अन्य चीजहरूका लागि खोजी गर्दछन्।
मानौं तपाईं जैविक खाद्य पदार्थ स्टोर, प्राकृतिक ग्रोसर्स चलाउनुहुन्छ, र चाहनुहुन्छ व्यक्तिहरूले यसलाई फेला पार्न जब उनीहरू गुगलले 'मेरो नजिकका जैविक खाद्यहरू।' यसको लागि तपाईंले बिभिन्न SEO रणनीतिहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ जुन तपाईंको उद्यमको वेबसाइटलाई खोजी सर्तमा 'मेरो नजिकको जैविक खाद्य पदार्थहरू' लाई बढावा दिन्छ। '
< img src="/वेबकन्ट्स/img/1-15941336900.jpg ">
त्यहाँ २०० स्तर निर्धारण कारक गुगलले एक वेबसाइट मूल्यांकन गर्न प्रयोग गर्दछ। कुनै व्यक्तिलाई सबै कारकहरू विचार गर्दै वेबसाइट अनुकूलन गर्न यो सजिलो हुँदैन। यस जटिलता र एसईओ ज्ञानको अभावले भरपर्दो स्वचालित वेबसाइट अप्टिमाइजेसन समाधानलाई जन्म दिएको छ।
तपाईं कसरी सक्नुहुन्छ गुगललाई तपाईंको साइट मनपर्‍यो?
तल केहि राम्रा एसईओ अभ्यासहरू छन् जुन अनुसरण गरेपछि गुगलले तपाईंको साइटलाई प्रेम गर्दछ। यसलाई एक एक गरी बुझौं।
१। ईन्टेटि Eिंग शीर्षक ट्यागहरू
शीर्षक ट्यागहरूले गुगललाई तपाईले के व्यवहार गरिरहनु भएको छ र आफ्नो वेबसाइटमा अधिक यातायात ड्राइभको बारेमा जान्न दिनुहोस्। जब प्रयोगकर्ताहरूले गुगलमा केहि खोज गर्दछन्, तिनीहरू लिंकहरूमा क्लिक गर्न रुचाउँदछन् जुन उपयोगी र आकर्षक देखिन्छ।
२। मेटा वर्णनलाई बाध्य पार्दै
एक मेटा वर्णन प्रयोगकर्ताले देख्ने दोस्रो चीज हो किनकि यो खोज परिणामहरूमा वेबसाइटको शीर्षकको तल देखिने टेक्स्ट हो। राम्रोसँग लेखिएको मेटा वर्णनले प्रयोगकर्ताहरूलाई वेबपृष्ठको सामग्रीको बारेमा विचार दिन्छ र तिनीहरूलाई साइट भ्रमण गर्ने कि नगर्ने निर्णय गर्न दिनुहोस्।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको वेबपृष्ठहरूको मेटा विवरणले उनीहरूलाई ठीक वर्णन गर्दछ र सान्दर्भिक कीवर्डहरू समावेश गर्दछ। त्यहाँ धेरै ट्यूटोरियल छन् जुन तपाईंलाई उत्तम मेटा वर्णन लेख्नको लागि मार्गदर्शन गर्न सक्दछ।
।। HTTPS, HTTP होइन
HTTP र HTTPS बीचको भिन्नता एकल अक्षरको हो S (महसुस गर्नुहोस्) यो सुरक्षित वा सुरक्षाको रूपमा)। जे होस्, HTTPS राम्रो छ जब उद्देश्य पहिलो पृष्ठमा वेबसाइटलाई क्रमबद्ध गर्नु हो को गुगल खोजी परिणामहरू।
गुगलले पनि एचटीटीपी वेबसाइटहरूलाई असुरक्षितको रूपमा लेबल गर्दछ, र यसले यातायातमा कमी ल्याउँछ वा/र बाउन्स दरमा वृद्धि हुन्छ। । जब आगन्तुकहरूले पत्ता लगाउँदछ कि उनीहरूले असुरक्षित साइटमा पहुँच गरिरहेछन्, ती मध्ये धेरैले आफ्नो वेबसाइटको वित्तीय र वित्तीय विवरणहरू साझेदारी गर्न मन पराउँदैनन्।
।। उत्तरदायी डिजाइन
टेक्नोलोजीमा प्रगतिसँग, विभिन्न स्क्रीन रिजोलुसन र आकारका धेरै यन्त्रहरू जीवनको एक हिस्सा हुन्। त्यस्ता उपकरणहरूको प्रयोगकर्ता पनि बढेको हुनाले प्रतिक्रियाशील डिजाइनका साथ वेबसाइटहरू बनाउनु आवश्यक भएको छ।
एक उत्तरदायी डिजाइन वेबसाइट को तत्वहरु विभिन्न उपकरणहरु का फरक रिजोलुसन फिट गर्न अनुकूलन। गुगलले उत्तरदायी डिजाइन वेबसाइटहरू पनि मनपराउँदछ किनकि उनीहरू प्रयोगकर्ता अनुभव बृद्धि गर्दछ।
केही अध्ययनहरूले यो पनि देखाउँदछ कि उत्तरदायी डिजाइन भएका वेबसाइटहरूले खोज परिणामहरूमा फाइदा लिन्छन् जससँग उनीहरूको तुलनामा। स्थिर डिजाइन।
।। वेबपृष्ठ लोड गति
गुगलको एल्गोरिथ्मले वेबपृष्ठको लोडिंग गतिलाई महत्त्व दिन्छ। गुगल पुरस्कृत जब वेबपृष्ठ छिटो लोड र एक उच्च रैंकिंग दिन। विपरित पृष्ठहरू बिस्तारै सत्य हो जुन बिस्तारै लोड हुन्छ।
वेबसाइटको पृष्ठ लोड गतिले पनि असर गर्छ। व्यवसायहरू किनकि अधीर आगन्तुकहरू वेबपेज लोड हुनका लागि लामो प्रतीक्षा गर्न मन पराउँदैनन्। केही अध्ययनहरू भन्छन् कि प्रयोगकर्ताहरूले अधिकतम -5--5 सेकेन्ड प्रतिक्षा गर्छन्। यदि वेबपेज यस समयमा लोड हुँदैन भने, तिनीहरू अन्य विकल्पहरूमा सर्दछन्।
।। कीवर्ड-समृद्ध सामग्री
तपाइँ एक शब्द, शब्दहरूको सेट, वा वाक्यांश मानिसहरूले सर्च इञ्जिनमा खोजीको लागि प्रयोग गर्ने शब्दको रूपमा परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ। खोज इञ्जिनले खोज कुञ्जी शब्दमा आधारित परिणामहरू प्रदर्शन गर्दछ।
गुगलको एल्गोरिथ्म स्थिति सब भन्दा सान्दर्भिक परिणाम। अर्को शब्दहरुमा, खोजिएको कुञ्जी शब्दहरुमा सब भन्दा सान्दर्भिक वेबपेज खोजी परिणामहरुमा पहिले देखा पर्नेछ।
गुगलले पनि पुरस्कृत गर्दछ जब वेबसाइटमा एch्कर पाठमा कुञ्जी शव्दहरू हुन्छन्। यसले अनुमान-खेल रोक्छ र आगन्तुकहरूलाई बताउँदछ कि ती लिंकमा क्लिक गरेपछि उनीहरू कहाँ जान सक्छन्।
अधिकांश अनलाइन व्यवसायहरूले जैविक ट्राफिक मार्फत सम्भावित ग्राहकहरू पाउँछन्; जब व्यक्ति गुगल मा केहि खोज र खोज परिणामहरु बाट लिंक मा क्लिक गर्नुहोस्। तसर्थ, SEO कीवर्ड्स को साथ सामग्री प्रत्येक वेबसाइट मालिक सफल हुनको लागि आवश्यक हुन्छ।
।। छविहरू र भिडियोहरू समावेश गर्नुहोस्
गुगलले छविहरू, भिडियोहरू, र अन्य फाइलहरूको साथ वेबपृष्ठहरू मनपर्दछ। जब वेबसाइट मालिकहरूले राम्रो गुणवत्ता र सान्दर्भिक छविहरू वा भिडियोहरू तिनीहरूको वेबपृष्ठहरूमा समावेश गर्दछ, गुगलले उनीहरूलाई प्रयोगकर्ताहरूको लागि महत्त्वपूर्णको रूपमा पहिचान गर्दछ।
दिमागमा राख्नुपर्ने एउटा कुरा यो होइन छविहरू प्रत्यक्ष इन्टरनेटबाट प्रतिलिपि गर्नुहोस्। गुगलले अब नक्कल छविहरू चिन्न थालेको छ र वेबसाइटलाई सजाय दिई तिनीहरूलाई सजाय दिन्छ।
छविहरू र भिडियोको सटीक नामले ट्राफिकलाई बढाउँदछ। धेरै प्रयोगकर्ताहरू, गुगलमा केहि खोजको लागि, छविहरू वा भिडियो सेक्सन भ्रमण गर्न रुचि गर्दछ उनीहरूको खोजीहरूको नतीजा प्राप्त गर्न।
ई-वाणिज्य साइटहरूको मामलामा। , छविहरूको सही नामकरण एक महत्त्वपूर्ण चीज हो किनकि एक अप्रासंगिक नामको छविले सम्भावित साथै विद्यमान ग्राहकहरूलाई अपमान गर्दछ।
।। छविहरू Alt पाठको साथ
अघिल्लो बिन्दुमा, तपाईंले सिक्नुभयो कि गुगलले छविहरू र भिडियोहरूलाई सान्दर्भिक नामहरूको साथ प्रेम गर्दछ। नाम बाहेक, उद्देश्य छविहरूमा वैकल्पिक पाठ थप गर्नुपर्दछ।
Alt पाठमा, Alt भनेको "वैकल्पिक" हो। यो महत्त्वपूर्ण छ किनकि जब छविहरू लोड गर्न असफल हुन्छन्, जुनसुकै कारणको लागि, आगन्तुकहरू उनीहरूको बारेमा ALT टेक्स्टको मद्दतले सिक्छन्। कहिलेकाँही, व्यक्तिहरू 'ALT टेक्स्ट' र 'Alt ट्याग' को बीचमा अलमल्ल हुन्छन् किनकि उनीहरूलाई ती बिच फरक।
प्रत्येक व्यक्तिसँग इन्टरनेट सर्फिंग गर्ने वा वेबसाइट भ्रमण गर्ने आँखाको राम्रो जोडी हुँदैन। केही दृष्टिविहीन व्यक्तिहरू स्क्रिन रिडरको सहयोगमा इन्टरनेट सर्फ गर्छन्। छविहरूमा वैकल्पिक पाठ थप गर्नु पछाडि यो उद्देश्य पनि एक हो।
तपाईलाई थाहा छ कि गुगलले माया गर्नुको सट्टा सजाय दिन्छ जब यसले किवर्डको प्रमाण फेला पार्दछ। वेबपृष्ठमा भरिँदै। अल्ट पाठले गुगललाई अप्ठ्यारो नगरिकन वेबपृष्ठमा बढि कुञ्जी शब्दहरू थप्न अवसर प्रदान गर्दछ।
।। XML साइटम्याप
तपाईंले साईटम्यापको बारेमा सुन्नु भएको हुन सक्छ, तर यो XML साइटम्याप के हो? यो साइटम्यापको कोडेड संस्करण हो जुन गुगलको खोज ईन्जिन क्रोलरहरूलाई वेबपृष्ठमा सामग्री पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ।
त्यहाँ वर्डप्रेस प्रयोगकर्ताहरूलाई मद्दत गर्न धेरै साइटम्याप प्लगइनहरू छन्। जबकि, साधारण HTML साइटको साथले अन्यले XML साइटम्याप उत्पादन गर्ने वेबसाइटहरूको मद्दत लिन सक्दछ।
< div> एकचोटी तपाईले साइटम्याप सिर्जना गर्नुभयो, तपाईले यसलाई गुगल वेबमास्टर उपकरणको साथ दर्ता गर्नु पर्छ। यदि तपाईं त्यसो गर्न असफल हुनुभयो भने, खोजी ईन्जिन क्रोलरहरू तपाईंको साइटलाई अपेक्षित मान्यता प्रदान गर्न सक्षम हुनेछैन।
१०। लि Building्क निर्माण
तपाईं लिंक निर्माणलाई अन्यबाट सन्दर्भ प्राप्त गर्ने रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। जब अन्य वेबसाइटहरू (विशेष गरी उच्च-गुणवत्ता वालेहरू) एक खास साइटलाई सन्दर्भ गर्दछ, गुगलले बुझ्दछ कि सन्दर्भित वेबसाइटले उपयोगी सामग्री समावेश गर्दछ। त्यसो भए, यो खोज परिणामहरूमा उच्च पद प्राप्त हुन्छ।
लिंक निर्माणको मामलामा, गुणस्तर ओभरपावर मात्रा। यदि तपाइँको वेबसाइट को अप्रासंगिक वा गरीब वेबसाइटहरु बाट सयौं ब्याकलिंक्स छ, र तपाइँको प्रतिस्पर्धी प्रख्यात र सान्दर्भिक वेबसाइटहरु बाट मात्र केही backlinks छ, गुगल खोज परिणामहरु मा तपाइँको प्रतिस्पर्धी को साइट को रैंन्क को लागी छ।
उच्च गुणवत्ता र सान्दर्भिक ब्याकलिंक्स प्राप्त गर्न वेबसाइट मालिकहरूको सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो। वेबमास्टरहरू/डिजिटल मार्केटरहरू। यदि तपाईंसँग एउटा वेबसाइट छ भने, तपाईंसँग कुन वेबसाइटहरू उच्च-गुणवत्ता ब्याकलिks्कहरू प्राप्त गर्न उत्तम छन् भन्ने विचार हुन सक्छ।
याद गर्नुहोस्, सामाजिक नेटवर्कबाट लिंकहरू पनि उच्च छन्। क्वालिटी ब्याकलिंक्स। तिनीहरूलाई बेवास्ता गर्नु यो राम्रो विचार होईन।
त्यसो भए, यी शीर्ष १० तरीकाहरू हुन् जुन गुगललाई तपाईंको साइट मनपर्दछ। गुगल संग तपाईंको वेबसाईटको सम्बन्ध सुधार्ने धेरै अन्य तरिकाहरू छन्। त्यसो भए, थोरै अनुसन्धान गर्नुहोस् वा एक विश्वसनीय डिजिटल मार्केटिंग सेवा प्रदायकसँग सम्पर्क राख्नुहोस्।
गुगलले प्रत्येक साइट मनपर्दछ जसले गुणवत्ता र मूल सामग्री प्रस्ताव गर्दछ। यदि एक वेबसाइटले अन्य विश्वसनीय स्रोतहरूबाट ब्याकलिks्कहरू प्राप्त गर्दछ, गुगलले यसलाई अधिक विश्वास गर्दछ। गुगलको प्रेम तपाईंको साइट को लागी तपाईको प्रतिस्पर्धी भन्दा तपाईलाई उच्च बनाउन को लागी तपाइँ नयाँ ग्राहकहरु र प्रशंसक जीत दिलाउन मद्दत गर्दछ।